ILutsen Log Lodge eneLake Superior Views
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguDiana
Baleka ubomi bemihla ngemihla, yiza kude nezihlwele, kufutshane nendalo ...
Ikhabhathi enomtsalane, kodwa ebanzi ebekwe entliziyweni yeLutsen kwiSki Hill Road enokufikelela ngokulula kuyo yonke imisebenzi yangaphandle.
Ngubani ongekhe athandane nale khabhinethi ihonjiswe kakuhle yealpine ineplani yomgangatho ovulekileyo, iisilingi ezigudileyo, indawo yomlilo yerhasi kunye nebhafu yejacuzzi kwigumbi lokulala elikhulu (elikumgangatho wesibini) elinembono yeLake Superior kunye nethambeka leMoose Mountain.
Inqanaba eliphambili lesicwangciso somgangatho obanzi sivumela wonke umntu ukuba abe kunye, afunde incwadi ngaseziko, adlale imidlalo, apheke, abhiyozele! Amagumbi okulala amabini kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo elinebhafu abekwe kumgangatho omkhulu.
Indawo yethu ibekwe phakathi kwemizuzu yokuhamba ngeenyawo ukuya kwiiNtaba zeLutsen ezibonelela ngeyona ndawo ibalaseleyo yokutyibiliza e-Midwest, iCourse yeSizwe yeGalufa, enemingxuma engama-27 kunye neembono eziphefumlayo zeLake Superior. I-North Shore Winery kunye neBrew House zingaphaya kweLodge Lane. Icandelo elitsha lendlela ye-Gitchi-Gami State yi-1/4 yeekhilomitha ezantsi kwe-Ski Hill Road, ukubonelela ngeekhilomitha zendawo yokuhamba ngebhayisikile. Iimayile zokuhamba intaba, ukuhamba ngekhephu kunye neendlela zokuhamba ngebhayisekile entabeni ziyafikeleleka kwiyadi yethu engasemva!
Iveranda ekhuselweyo yamaxesha amathathu iya kwenza iingokuhlwa zasehlotyeni zaseNorth Woods zibe mnandi ngokujonga umlilo wenkampu kwiyadi yethu engasemva.
Ukuba kufutshane kwiiNtaba zeLutsen kunye nedolophu yaseLutsen kukunika ukufikelela lula kwaye kulula ukufikelela kumathambeka, iindawo zokutyela zasekhaya, iFika Kofu, iibhari kunye neevenkile.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lutsen